5 taona ny Blaogin’i Voniary – Mbola miredareda ny afo – Blaogin'i Voniary
5 taona ny Blaogin’i Voniary – Mbola miredareda ny afo
06 Jolay 2016 – 06 Jolay 202. Feno 5 taona ny Blaogin’i Voniary!Mbola tsaroako ilay afo niredareda nanosika ahy hanoratra sy hizara izany amin’ny blaogy mba hohitan’ny hafa. « Ny hanaitra ny hambom-pon’ny Malagasy mba hitiavany ny maha-Malagasy azy sy hananany toe-tsaina mpandresy ». Mbola tsy miova izany ary Mbola miredareda ny afo.
Mitohy hatrany ny blaogy
Variana amin’ny fiainan-tokantrano sy ny asa aman-draharaha fotsiny indraindray Dia tsy mahita fotoana ivelesana kitendry. Raha ny tian-kambara anefa Dia tsy lany satria avy amin’ny trangam-piainako, ny traikefan’ny hafa sy ny fahalalana azoko eny rehetra eny ihany no isarihako lesona ka mampiakatra ny aingam-panahiko. Indraindray koa seriny amin’ny fikarakarana hetsika (Teny Gasy 2.0, Fifaninanana Lahatsoratra Am-blaogy…) , famoronana fitaovana (Diary Sy Rakibolana, Kahie Mpandresy…) ka zary hadino ny penina. Izany rehetra izany anefa tsy mivoana fa mbola tafiditra ao anatin’ny antom-pisian’ny Blaogin’i Voniary avokoa.
Mivelatra eo amin’ny sehatry ny teny malagasy sy ny fampivoaran-tena
Tao anatin’izay dimy taona izay dia tsy nitsaha-nivelatra ny Blaogin’i Voniary teo amin’ny sehatry ny teny malagasy raha tsy hilaza fotsiny ny famoahana ny Diary Sy Rakibolana sy ny fananganana ny fikambanana Teny Gasy 2.0 . Teo koa ny fandraisana anjara tamin’ny hetsika maro isan-karazany toy ny Konferansa Momba ny Soratra sy ny « Teny malagasy, antsika rehetra ». Ankehitriny , manolotra fampianarana teny malagasy ho an’ny vahiny sy ireo mpiray tanindrazana ihany koa i Voniary.
Eo amin’ny sehatry ny fampivoaran-tena indray dia tsangambato lehibe ilay boky « Raiso an-tanana ny fiainanao » nivoaka tamin’ny taona 2020. Eo koa Ilay « Kahie Mpandresy », fitaovana ikolokoloana ny fijery miabo sy ny toe-tsaina mpandresy isan’andro. Ankehitriny dia efa misokatra ihany koa ny vondrona » Tafatafa Mahasoa – Bevohoka » manampy amin’ny fiainana am-pahasambarana ny fitondrana vohoka.
Tsy hoe midoka tena toa papelika sanatria na mitanisa zava-bita hitsinjovana seza toa mpanao politika raha milaza an’ireo. Ao anatin’ny fijery miabo indrindra ny fanaovana jeritodika sy ny fahaizana mankasitraka amin’izay tsara vita. Mampitombo ny herin-tsaina izany ary manampy hikatsaka ny tsara sy ambony kokoa.
Mankasitraka anareo mpanaraka sy mpanohana
Izany rehetra izany anefa dia zava-poana ihany raha tsy teo ianareo. Ao ianareo namana akaiky manohana sy manampy amin’ny endriny isan-karazany araka ny mampiavaka anareo tsirairay avy. Ao koa ireo zoky sy zandry mitovy tolona, mitovy firehana na amin’ny sehatry ny teny malagasy na amin’ny sehatry ny fampivoaran-tena. Mankahery , mampitombo risi-po ny fifaneraserana sy ny fifanakalozana aminareo. Ao koa ianareo mpanaraka mahafatra-po (blaogy, Facebook, Instagram, LinkedIn). Misaotra, Mankasitraka, mankatelina!
Ho an’ny dimy taona manaraka, apetrako am-pitokisana amin’ilay Nahary, faniriako ny mbola hirosoan’ny Blaogin’i Voniary lalina koa amin’ireo sehatra roa ireo. Ny soratra tsy hijanona fa hitohy hatrany satria ny aingam-panahy tsy mamela hitomoe-poana. Tsapako kosa anefa fa maro ny fomba azo ampitana hafatra ka hiezaka hisokatra sy hitrandraka ireny fitaovana isan-karazany ireny aho.
5 taona, blaogy gasy, Blaogy malagasy, fampivoaran-tena, teny gasy 2.0, teny malagasy, vokatra blaogin'i voniary
Mila mivoatra ianao mba handresenao ny Covid-19
Izay voleko no hotazako – Xena Zen Aom (Rakotomalala Amour)
2 commentaires sur “5 taona ny Blaogin’i Voniary – Mbola miredareda ny afo”
Avotra Ny Aina dit :
16 juillet 2021 à 6 h 57 min
Mankasitraka indrindra anao nizara nandritra ny dimy taona. Ho ahy manokana dia Telo taona izay no nahafantarako sy niarahako nigoka ireo tsara nozarainao ho antsika. Tena nitondra soa ho ahy izany ary nozaraiko ho an’ireo kely manodidina ahy mitovy fijery.
Ho ahy manokana dia tena liana amin’ireo hetsika karakarainao maro ireo nefa tsy dia afaka mandray anjara satria miasa sy mitoetra aty amorontsiraka. Mionona amin’ny vokatra zaraina amin’ny blaogy sy boky aloha hatreto. Sitrakay mpanarakaloatra noho izany ity vina napetrakao ity, ny fizarana ampitaindavitra.
Mirary soa ho an’ny Voaniary ho amin’ny folo taona ho avy
Mankasitraka indrindra e! Hery lehibe ho ahy ny fisianareo sy ny fanohananareo ❤